News Collection: फेसबुकमा भुपु मायालुको चियोचर्चो
फेसबुकमा भुपु मायालुको चियोचर्चो
कुनैपनि जोडीको रोमान्टिक सम्बन्ध टुंगिएसँगै फेसबुक फ्रेन्डसीपको अर्थ के हुने वा नियम के रहने ? सायद यसको विषयमा कुनै नियम बनेको छैन र जिवनमा सम्बन्ध टुट्यो भन्दैमा फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टबाट पनि हटाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन ।
यहीँ कुरालाई हालै अमेरिकामा भएको एक अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ । अमेरिकाको वेस्टर्न विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार युवायुवतीहरु आफुहरुबीचको प्रेमसम्बन्ध अन्त्य भएपनि फेसबुक सम्बन्धलाई टुंगाइहाल्न रुचाउँदैनन् ।
आफ्नो शोधपत्र ‘ इट्स कम्प्लिकेटेड : रोमान्टिक ब्रेकअप्स एण्ड दियर अफ्टरमथ अन फेसबुक’ मा शोधकर्ता वेरोनिका लुकासले लेखेकी छिन् की ८८ प्रतिशत मानिसहरु प्रेम सम्बन्ध अन्त्य भएसँगै फेसबुकबाटै आफ्नो भुपु मायालुको बारेमा चियोचर्चो गरिरहेका हुन्छन् ।
उनका अनुसार अध्ययनको क्रममा निम्न तथ्यांक पाइयो :
· ७० प्रतिशत मानिसहरुले आफ्नो भुपु मायालुको बारेमा फेसबुकमार्फत बुझ्न म्युचुअल प|mेन्ड प्रोफाइलको प्रयोग तथा फ्रेन्डकै रुपमा लगइन गर्ने गरेका छन् ।
· ४८ प्रतिशत मानिसहरु आफ्नो भुपु मायालुसँग फेसबुकको सम्बन्ध कायम राख्छन् अर्थात् भुपु मायालुसँग फेसबुकमा साथीको रुपमा रहेका हुन्छन् ।
· ५२ प्रतिशत मानिसहरुले आफुलाई आफ्नो भुपु मायालुले फेसबुकमा पोष्ट गर्ने गरेको तस्वीर देखेर इष्र्या लाग्ने गरेको बताए ।
· ६४ प्रतिशत मानिसले आफु फेसबुकमा भुपु मायालुले पहिले पठाएका पूराना म्यासेजहरु पढेर आनन्द लिने गरेको र विभिन्न ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेको बताए ।
· त्यस्तै ७४ प्रतिशत मानिसले आफुले आफ्नो पूर्व मायालुको फेसबुक प्रोफाइल नियमित रुपमा चेक गर्ने तथा भुपु मायालुको अहिलेको जोडीको बारेमा पनि बुझ्ने गरेको बताए ।
· त्यस्तै ३१ प्रतिशत मानिसले आफुले आफ्नो भुपु मायालुलाई जलन गराउन विभिन्न नयाँनयाँ तस्वीर फेसबुकमा अपलोड गर्ने गरेको बताए ।
मित्रहरु अमेरिकामा गरिएको अध्ययन निष्कर्ष त यस्तो रह्यो । तपाइँको हकमा चाहीँ के कुरा लागु हुन्छ त ? तपाइँले प्रेम सम्बन्ध टुटेसँगै आफ्नो भुपु लाई फेसबुकको प|mेन्ड लिस्टबाट हटाउनुहुन्छ कि हुँदैन ? नढाँट भन्नुस् ल ।